MediaLight Mk2 Inogoneka A19 Bulb - MediaLight Bias Lighting
musha MediaLight Mk2 Inogoneka A19 Bulb
MediaLight Mk2 Inogoneka A19 Bulb
Mutengo wepakutanga $42.95
Mutengo wepakutanga $42.95 - Mutengo wepakutanga $322.95
product.variants.choose_variant Mumwe / E26 / 110v - $ 29.95 Mumwe / E27 / 220v - $ 29.95 6-Rongedza / E26 / 110v - $ 169.95 6-Rongedza / E27 / 220v - $ 169.95 12-Rongedza / E26 / 110v - $ 309.95 12-Rongedza / E27 / 220v - $ 309.95
Single 6-Pack 12-Pack rongedza
Iyo MediaLight Bulb yakagadzirirwa kutevedzera SMPTE Standard ST 2080-3: 2017 'Reference Kuona Nzvimbo Yekuongorora HDTV Mifananidzo.'
Inoratidzira iyo Ultra-yakakwira CRI uye Yakafananidzwa D65 tembiricha tembiricha yeColorgrade Mk2 chip kubva kuScenic Labs. iyo inodzikamisa MediaLight Mk2 inopa kusagadzikana kusingachinjiki kune yako imba yemitambo uye ndiko kuwedzera kwakakwana kune yako grading suite.
Yakagadzirirwa Lutut dimmers *
3 Gore Gore Warranty
MediaLight Mk2 Bulb haisi girobhuwo zvaro. Izvo hazvishandise yakachipa COB mwenje sosi. Iine makumi matatu nemasere Colourgrade Mk32 machipisi (anopfuura 2m MediaLight Mk1 Eclipse, asi iine simba rakafanana rekuparadzira simba) uye, kusiyana neCBB mabhuru, haidi kusvika pamaminetsi gumi neshanu kusvika patembiricha yemavara. Izvi ndizvo zvatiri kureva nekukurumidza kudziya.
Iyo MediaLight Bulb yakavakwa zvakasiyana kubva kune mazhinji mabhuru uye inogona kushanda zvakasiyana neyako iripo dimmer. It yakagadzirirwa Lutron LED dimmers nekuti ivo vanopa trim yekugadzirisa switch iyo inobvumidza kuzere uye kwakaringana kutonga kwe dimming renji. Uye nhau dzakanaka ndedzekuti Lutron dimmers ane mutengo wakaringana. Muzviitiko zvakawanda, mamwe madhimoni anenge achingoita zvakanaka, asi iwe unogona kuona zvinotevera nyaya:
Hushoma huwandu hwekudzikira renji (Kazhinji 70-90% renji vs. 100% ine incandescent). Inogona kunge isingaendi yakaderera kana yakakwira.
LED Bulbs inogona kusadzima pakadzika kudzikisira kudzika: izvi zvinokonzereswa nedimmer kufunga kuti girobhu rakadzima zvachose nekuda kweiyo yakaderera huwandu hweturu iyo LED inoshandisa.
Pane dimming system inoenderana neX10 kana Power Line Carrier (PLC) tekinoroji yekudzora, ma LED anogona kudzima kana ma module achitaurirana nekuda kwekuchinja kushoma kwesimba pamutsetse.
Zvinokurudzirwa kuti uedze madhimoni ako aripo kuti uone kana achishanda neMediaLight Bulbs yawakatenga. Mikana ndeyekuti ivo vachashanda zvakanaka. Kana zvisiri, dambudziko richagadziriswa nekutenga dimmer yakanyorwa pazasi:
Revhitiko TTI06-1 NG
Zvakare chero yeLutron Caseta inopera. Chero bedzi paine yakaderera-magumo trim, inozoshanda pasina kusagadzikana kana kamwe-kamwe kudonhedza pane akadzika magadziriso.
5.0 Kubva pane 16 Ongororo
Donald T. Nagle Mwana
Kuita kukuru kubva pachigadzirwa chakasimba.
Ini ndanyatsogutsikana nemitambo yeMk2 bulbs Yakatengwa. Kuverenga nekutarisa Terevhizheni kunonyanya kunakidza uye kunozorodza. Makara anowedzera kusimba pasina kuve akazara uye zvinyorwa zviri nyore kuverenga pasina kumeso kweziso. Yakakurudzirwa maziso ekukwegura.
Mumwe / E26 / 110v
Iwo A19 mababu akakwana uye zvese zvandakauya kutarisira kubva kuMediaLight
Kwakanaka, asi ini ndoda kuita kwakawanda
Ini handisi kutora chero nyeredzi kure sezvo chigadzirwa chinoita zvazvinotaura, zvakanaka. Nekudaro, pamwe ramangwana girobhu vhoriyamu raizokwanisa kudzikiswa pasina kudikanwa kweiyo dimmer yedhivha, ala iyo Hue nemamwe mabhuru. Zvingave zvakanaka kusunga neapp uye / kana vabatsiri vezwi. Zvakare, zvingave zvakanaka kuve ne bi-color sarudzo. Ndoziva musika uyu wakanangwa hauna hanya neizvi, asi kune mumwe munhu seni anoda kusanganisa mashandiro aya uye kururamisa kwemavara munzvimbo yakajairika yekurarama, zvakakosha. Zvingave zvakanaka kuchinjira ku6500 uchiri kugadzirisa, ipapo chimwe chinhu chingati chinodziya kune zvese zvimwe, pamwe nekukwanisa kudzima kubva panzvimbo yakagara kuburikidza neapp uye / kana izwi mubatsiri.
Ndinoda magetsi aya!
Ndakawana izvi apo pandinoda mwenje mudiki wekuwedzera wekubatsira yangu Medialight MkII kusarudzika mwenje. Izvo zvigadzirwa zvese zvakagadzirwa mushe, zviri nyore kuisa, uye yemhando yepamusoro kuvhenekera pamutengo unonzwisisika - zvese zvine naka vatengi vatengi. Ini ndichave ndichiwedzera uye nekuvarumbidza zvakanyanya!
Yakanaka inoshanda nemazvo